Public Kura | » चुनाव रणनीति सिकाउँदैं पूर्व एसएसपी चुनाव रणनीति सिकाउँदैं पूर्व एसएसपी – Public Kura
May 16, 2022, Monday
Feature मुख्य समाचार
कपिलवस्तु– तपाइँ अवकास प्राप्त जीवन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ? कोही फुर्सदमा देशाटनमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला । कोही सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नु पो हुनुहुन्छ की ? व्यापार, शिक्षा र आफ्नो दक्षता, क्षमता अनुसारका काममा लाग्नुभएको होला ।
कपिलवस्तुमा पूर्व एसएसपी विक्रमसिंह थापाले सेवा निवृत्त भए पनि राजनीति रोजेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरिरहेका उनी अहिले तराईको जिल्लामा रणनीतिकारका रुपमा देखिएका छन् । यसपटक स्थानीय चुनावमा उनको सक्रियता लोभलाग्दो छ । कपिलवस्तुमा कांग्रेसको बिरासत फर्काउन दिनरात लागि परेका छन् । अहिलेको चुनाव स्वच्छ छबी, बिकास र सेवा प्रेमी भएर मात्र जित्न सम्भव छैन । त्यसैले उनी चुनाव रणनीति बनाउन क्रियाशील छन् । त्यसका लागि उनले जिल्लामा रहेका युवा र तरुण कांग्रेस कार्यकर्तालाई निर्वाचन व्यवस्थापन र सफलताका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति सिकाइरहेका छन् ।
फौजी कुसलता र अनुशासनको समिश्रणले राजनीति व्यवस्थित हुने उनको भनाई छ । दबाब र प्रभावको राजनीतिमा रणनीति नयाँ कुरा हो । छिमेकी भारतमा निर्वाचनमा रणनीतिकारको महत्तवपूर्ण भूमिका देखिन थालेको छ । पूर्व एसएसपी थापाले लोकतन्त्रको अनुभूति सबैले गर्न पाउन भनेर सचेत रहेको बताए । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन हुनुअघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अपनाउनु पर्ने योजना र रणनीतिका बारेमा सचेतनामूलक अनुशिक्षण प्रदान गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनभन्दा अगाडि के–के कुरामा सचेत हुने, निर्वाचन अवधिलाई कसरी उपयोग गर्ने र निर्वाचनपछि कस्ता सतर्कता जरुरी छन ? भन्नेबारे युवालाई सिकाइरहेका छन् । तीन वर्षअघि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका उनले अवकास जीवनमा आफूले जानेका, सिकेका सीप र क्षमतालाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्न उपयोग गरिरहेको बताए । ‘जनताले चाहेका जनप्रतिनिधि निर्वाचन मार्फत आएनन् भने त्यसले लोकतन्त्रप्रति नकारात्मक धारणा प्रदान गर्छ,’ उनले भने्, ‘त्यही भएर लोकतन्त्रबादी सचेत र सर्तक हुनु जरुरी छ ।’
३० वर्षे प्रहरी सेवाका क्रममा २०६० सालमा प्रहरी सर्वोत्कृष्ट पूर्णशान्ति पुरस्कार पाएका थापा महाराजगंज नगरपालिकाको कजरहवाबाट काँग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै महाधिबेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका हुन् । अहिले उनी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सदस्य तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्य छन् । सेवामा हुँदा काठमाडौं, ललितपुर, बाँके, रुपन्देही र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा उनी प्रहरी प्रमुख भएर उत्कृष्ट काम गरेका थिए ।
मोदी र देउवाद्वारा मायादेवी मन्दिरमा पुजाआजा [फोटोफिचर]
माेदी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा
गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट व्यवसायिक उडान सुरु, नेपालको हवाई इतिहासमा ऐतिहासिक दिन
आज भारतीय प्रधानमन्त्री माेदी लुम्बिनी आउँदै
मोदीको स्वागतका लागि तयारी पूरा, लुम्बिनी झकिझकाउ
मायादेवी–१ को अध्यक्षमा एमालेका लोध विजयी
मायादेवी–८ को अध्यक्षमा एमालेका मगर विजयी
बुटवल उपमहानगरमा पाण्डेको फराकिलो अग्रता
सिद्धार्थनगरमा काँग्रेसको निरन्तर अग्रता, उप-प्रमुखमा राप्रपा अगाडि
देवदहमा एमाले १३६ मतले अगाडि
१ जेष्ठ २०७९
‘धर्म र आस्थाको आधारमा समाज विभाजित हुनुहुँदैन’
२४ बैशाख २०७९